ကျွန်တော် မှတ်မိသမျှ ကိုမောင်မောင်ကြွယ် (အပိုင်း-၁) | ပျူနိုင်ငံ
သမ်မတဟောငျး Trump ကို တရားစှဲဆိုမှု ဖဖေျောဝါရီ ၈ ရကျ စတငျကွားနာမညျ
အခြေခံပညာကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (BESU) အဖွဲ့ဝင်၊
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အခြေခံပညာ ကျောင်းသား
သမဂ္ဂကို ၁၉၈၈- ၈၉ ခုနှစ် စတင်ထူထောင်ရာတွင် ဦးဆောင်
ခဲ့သော ကျောင်းသားငယ်လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ကိုမောင်မောင်ကြွယ်
တစ်ယောက် ကချင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် ABSDF (မြောက်ပိုင်း)
ပါဂျောင် တပ်စခန်းတွင် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖ်ါဝါရီလ (၁၂)ရက်နေ့
တွင် ကျဆုံး (စွပ်စွဲ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရ) ခဲ့သည်မှာ ယခုအခါ
နှစ်ပေါင်း(၂၀) ပြည့်ဖို့ မဝေးတော့ပါ။
အရပ် မနိမ့်မမြင့်၊ ပိန်ပိန်ပါးပါး ခန္ဓာကိုယ်၊ မျက်နှာပုံစံအားဖြင့်
ဖ.ဆ.ပ.လ ခေတ် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်
ခဲ့သူ ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် အင်မတန် ဆင်တူသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုကြောင့်
ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက ကိုမောင်မောင်ကြွယ်ကို သူ့ မွေးစားသား
ပမာ အင်မတန် ခင်မင်ရင်းနှီးကြောင်း ပြောစမှတ် ရှိပါတယ်၊ ကွယ်လွန်
သူ ကိုမောင်မောင်ကြွယ်နှင့် ဒီစာကို ရေးတဲ့ ကျနော်ဟာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့
၁၉၈၉ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စတင် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်၊ အုတ်လမ်း
NLD ရန်ကုန်တိုင်းရုံးနှင့် ခြံချင်း ကပ်လျပ်ရှိသော ဒေါ်ချိုတို့ ခြံထဲဆီ
ကျနော် ရောက်ခဲ့သော အကြောင်းကိစ္စမှာ အခြေခံပညာ ကျောင်းသား
သမဂ္ဂ အစည်းအဝေးပွဲများ ဖြစ်ပါတယ်၊ အုတ်လမ်း NLD ရန်ကုန်တိုင်းရုံး
လို့ ကျနော် အဲလို ရေးလိုက်လို့ တစ်မျိုး မထင်ပါနဲ့၊ အဲဒီခေတ် ၁၉၈၉
ခုနှစ်က NLD ရဲ့ ရုံးချုပ်ဟာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းပေါ်မှာပဲ ရှိနေ
သေးပါတယ်၊ အုတ်လမ်းရုံးဟာ တိုင်းအဆင့် ရုံးဖြစ်တာမို့ တိုင်းရုံးလို့
ကျနော်တို့ ခေါ်ကြတာပါ၊ ဒေါ်ချိုတို့ ခြံထဲက အိမ်နဲ့ ကပ်လျပ်မှာ ကား
ဂိုဒေါင်ရှိပါတယ်၊ ကားဂိုဒေါင်ရဲ့ အတွင်းဖက် အပေါ်တစ်နေရာမှာ
ထပ်ခိုးပုံစံ ပြုလုပ်ထားပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သတင်းစာ
အဟောင်းတွေကို နှစ်အလိုက် ထုတ်ပိုးပြီး သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
အဲဒီ ကားဂိုဒေါင်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားငယ် လှုပ်ရှားမှု
အ.က.သရဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာ ကျနော့် မျက်လုံးဟာ အဲဒီ
သတင်းစာထုတ်တွေဆီပဲ ရောက်နေလေ့ရှိပါတယ်၊ မောင်မောင်ကြွယ်အား
ရယ်စရာ မောစရာအဖြစ် ကျနော် ပြောလေ့ရှိတာက …
`မောင်မောင်ကြွယ်၊ မင်းအမေ ဒေါ်ချိုကို ပြောကြည့်ပါလား၊ ဒီဂိုဒေါင်ကြီး
ကို ငါတို့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမယ်လို့၊ ဒီသတင်းစာ စက္ကူအဟောင်း
တွေကို ပစ္စည်းအဟောင်းတို့ သတင်းစာစက္ကူ အဟောင်းတို့ကို ပိဿချိန်နဲ့
လိုက်ဝယ်တဲ့ ကုလားတွေဆီ ရောင်းစားလိုက်ရင် ပိုက်ဆံ တော်တော်
ရမယ် သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့ အ.က.သ အတွက်လည်း ရန်ပုံငွေ ရတာပေါ့ …´
အဲဒီအချိန်က ကျနော် မှတ်မိသလောက် ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းတို့ အိမ်
မှာ စက်ဘီးတစ်စီး ရှိပါတယ်၊ အဲဒီစက်ဘီးဖြင့် မောင်မောင်ကြွယ်ဟာ
တခါတရံ ကိုကိုလတ် (အ.က.သ G.S၊ ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်
သူ)၊ တခါတရံတွင် တွတ်ပီ (အ.က.သ ညီလာခံက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေး
ချယ်ခံရဖူးသူ)၊ တခါတရံတွင် ညီညီလှိုင် (ယခု ထိုင်းနိုင်ငံ)တို့နှင့်အတူ
ဗဟန်း ရေတာရှည်လမ်းဖက်တွင် နေထိုင်သော သူ စိတ်ဝင်စားနေသည့်
ကျောင်းသူလေး အိမ်ဖက်သို့ ညနေခင်းတချို့မှာ လူငယ်တို့ သဘာဝ
လူပျိုလည်လေ့ရှိပါတယ်၊ ကျနော် မှတ်မိသလောက် မောင်မောင်ကြွယ်
ဟာ အပြင်ထွက်ရင် ဦးထုပ်တွင် `နှိပ်စိ´ တပ်ထားသော ဦးထုပ်ကို
ပျောက်ကြားသပိတ် တိုက်ပွဲများနှင့် မောင်မောင်ကြွယ်
၁၉၈၉ ခုနှစ် ရန်ကုန် သိမ်းကြီးဈေး၊ သံဈေးသပိတ် လှုပ်ရှားမှုများ
အတွင်း မောင်မောင်ကြွယ်ဟာ ထိုလှုပ်ရှားမှုများအတွင်း ပါဝင်ကြတဲ့
အ.က.သ ကျောင်းသားတွေကို စည်းရုံးရာမှာ တာဝန်ယူရတဲ့
စည်းအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါ၊ (ကျနော် မှတ်မိသလောက် သိမ်းကြီးဈေး
သံဈေးသပိတ်ခေတ် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အ.က.သ တဖွဲ့တည်း
မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြား ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ၊ တပ်ဦးလူငယ်
အဖွဲ့တွေနဲ့ လက်တွဲပြီး အလုပ် လုပ်ရပါတယ်)။
(ဒီအကြောင်း ယခင်က ဒီနေရာမှာ ရေးထားပါတယ်။)
တံတားနီ တစ်နှစ်ပြည့် (၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆) ...
တံတားနီ တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားအတွက် အ.က.သ ဗဟိုက
ထုံးသုတ်ထားတဲ့ ကန်ဘောင်ရိုးလမ်းတွေပေါ် ဆေးအနီရောင်တွေ
လောင်းချဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးလောင်းချတဲ့
အလုပ်ကို လုပ်ရတဲ့ ကျောင်းသား အရေအတွက်ဟာ ကျနော် မှတ်မိ
သလောက် လူ(၂၀)လောက်ရှိပါတယ်၊ လှုပ်ရှားမှုကို နံဘေးက စောင့်
ကြည့်ပေးရတဲ့ အပြင်စည်းအဖြစ် (၁၀)ယောက်နီးပါး တာဝန် ယူခဲ့ကြ
ပါတယ်၊ မောင်မောင်ကြွယ်ဟာ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအတွင်း အတွင်းစည်း
ဒုတာဝန်ခံအဖြစ် ဆေးအနီရောင်တွေ လိုက်လောင်းချ ပက်ကျဲခဲ့တဲ့
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ဆန္ဒပြပွဲ (၂၅.၃.၁၉၈၉)နေ့ ….
အဲဒီအချိန်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့
ကြွေးကျော်သံဟာ `စစ်အစိုးရ ကျဆုံးရေး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ
ဖွဲ့စည်းရေး´ ဖြစ်ပါတယ်၊ ခုချိန်ခါ ဘာကြောင့် အဲဒီအချိန်က
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလဲလို့ မေးခွန်း
မေးခဲ့ရင် ဖြေဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်က အဲဒီ
လုပ်ရပ်အတွက် မေးခွန်းများ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ ပထမဆုံး ဆန္ဒပွဲပြ
သတ်မှတ်ဖို့ အ.က.သမှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲဟာ (၂၅.၃.၁၉၈၉)
နေ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီမတိုင်ခင် (၂၄.၃.၁၉၈၉)နေ့ ဖြစ်ပါတယ်၊
ညနေပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ အ.က.သက ကျောင်းသားတွေ (၃၀)နီးပါး
အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်သွားကြပါတယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း
NLD ရုံးချုပ်ရဲ့ တစ်ဖက် ကားလမ်းနံဘေးက ကုန်းမြင့်တွေပေါ်
မှာ ကျနော်တို့ အုပ်စုလိုက် အချိန်တော်တော်ကြာ စောင့်နေ
ခဲ့ကြပါတယ်၊ (၂၄.၃.၁၉၈၉)နေ့မှာ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းလို့
မနက်ဖြန် (၂၅.၃.၁၉၈၉)နေ့ ရွှေ့မယ်လို့ (ကို)မင်းဇင်က ကျနော်
တို့ကို ပြောပြပါတယ်၊ အဲဒီနေရာကနေ တာမွေမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့
(ကို)မင်းဇင်တို့ အိမ်ဆီ ကျနော်နဲ့ မောင်မောင်ကြွယ် အပါအ၀င်
အ.က.သ ကျောင်းသား (၁၀)ဦးနီးပါး လိုက်ပါသွားပြီး (၂၅)ရက်
နေ့ အစီအစဉ်တွေအတွက် (ကို)မင်းဇင်တို့ နေအိမ် အောက်ထပ်
က ဆရာဦးမြသန်းရဲ့ ကျူရှင်ခန်းထဲမှာ ထပ်မံပြီး ဆွေးနွေးခဲ့
ကြပါတယ်၊ (၂၅.၃.၁၉၈၉) နေ့ ကျနော်တို့ အုပ်စုလိုက် ကမ္ဘာအေး
ဘုရားလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း မီးပွိုင့်ကနေ စပြီး ချီတက်
ခဲ့ပါတယ်၊ NLD ရုံးချုပ်အကျော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှေ့
မရောက်ခင် အ.မ.က ကျောင်းရှေ့အရောက်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်
ဖက်က စစ်ကားတွေ ရောက်လာပါတယ်၊ သွပ်ဆူးကြိုးတွေ ပတ်ထား
တဲ့ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ လိုက်ရိုက်ပါတော့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့
အားလုံး ဒေါ်စုခြံထဲကို ၀င်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်၊ ခြံထဲရောက်တော့
အဲဒီအချိန်က ဒေါ်စုခြံ ၀င်ကာစမှာ `၀ါးရုံတဲကြီး´ ရှိပါတယ်၊
အဲဒီနေရာမှာ NLD ဗဟိုလူငယ်ရုံး ရှိပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်က NLD
ဗဟိုလူငယ်ရဲ့ တာဝန်ခံဟာ ကိုစိုးသိမ်း ဖြစ်ပါတယ်၊ (ကို)မင်းဇင်နဲ့
(ကို)မင်းနိုင်တို့ကို ကိုစိုးသိမ်း ဆူနေတဲ့ အချိန်မှာ မောင်မောင်ကြွယ်
အပါအ၀င် ကျနော်တို့ အားလုံး အဲဒီ ၀ါးရုံတဲကြီးထဲမှာ ရှိနေ
မိုးကောင်းဘုရား ကားမှတ်တိုင် လှုပ်ရှားမှု (၂၇.၃.၁၉၈၉) ….
မိုးကောင်းဘုရား ကားမှတ်တိုင် သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲမှုဟာ
စစ်အာဏာရှင်လက်ထက် ထင်ရှားတဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ်၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး လူစုခွဲ ခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ အ.က.သ ဗဟိုက CEC တွေ
ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြပါတယ်၊ မိုးကောင်းဘုရား ကား
မှတ်တိုင်ကနေ လူစုကွဲလာတဲ့ ကျောင်းသားအုပ်စုကို ထပ်မံ
စုစည်းပြီး ဦးနုရဲ့ ဒီ/ငြိမ်း ပါတီ (ဗဟန်း၊ ၀င်္ကဘာလမ်းရှိ၊ ဒီမို
ကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဌာနချုပ်) ရုံးဆီ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေ
ထဲမှာ မောင်မောင်ကြွယ်လည်း တစ်ဦး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလှုပ်ရှားမှု အကြောင်းကို ယခင်က ကျနော့်စာမျက်နှာမှာ
အပိုင်း(၃) … တို့ကို ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။
အ.က.သ ခေါင်းဆောင် ကိုသက်ဝင်းအောင် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့
သုံးနှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ပို့စ်မှာလည်း `မောင်မောင်ကြွယ်´
အကြောင်း ကျနော် တစွန်းတစ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ...။
(အပိုင်း(၂)တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ် ...။)
Posted by ကိုအောင် at 17:51
Labels: ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ, သမိုင်း
ညီမလေးတို့အတွက်တော့ အရာရာဟာ အဆန်းတကြယ် ပုံပြင်တွေ လိုပါပဲအကိုရေ....:(
၁၉၈၈ တုန်းက စန်းထွန်းတို့ တွေက ၆နှစ်အရွယ် ကလေးပဲ ရှိသေးတော့ အဲဒီအကြောင်းတွေ မသိဘူး..သတင်းအမှောင်ချတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ သမိုင်းအမှန်ကို မသိရဘူးလေ..ကို့ အောင်ပို့ စ်တွေ ဖတ်ရတော့မှ ကျောင်းသားတွေ စစ်အစိုးရကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှန်တွေ သိရတော့တယ်..ဆက်ရေးပါ ကိုအောင်..
၁၉၈၈ မှာ ၄ နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အိမ်ထရံကို သေနတ်ကျည်ဆံတွေ လာမှန်တာပဲ သတိရတယ်။ အဖေ့ဂုတ်ပေါ်ခွစီးပြီး တပ်မတော်နေ့ဆို ပန်းကုံးတွေ စွပ်ရတာအမော...။ အော်... အခုတော့လည်း ....
အကို့ပို့စ်ဖတ်မှ မသိသေးတာတွေ သိလာရတယ်။
29 December 2011 at 05:03
ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးလိုပေမယ့်လို့ အဲဒီတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ကတည်းက အရမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ပထမတန်းဘဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း တဆင့်စကား တဆင့်နား ဆိုသလို သူများပြောတာတွေကို နားထောင်ရင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့ရတာလေ။ ကိုအဖြူလေး ဆိုဒ်မှာလဲ တော်တော်များများလေး ဖတ်ခဲ့သေးတယ်။ ကိုအောင့် ဆိုဒ်ကို ကျွန်တော် မွှေနှောက်ဖတ်ရဦးမယ် အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီ... ဒါဟာလဲ နောင်တချိန် မြန်မာ့သမိုင်းတွေ ဖြစ်မလာဘူးလို့ဘယ်သူမှ ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေလဲ သိထားသင့်တယ်။
၀မ်းသာတယ် အမှန်ကို သိတဲ့သူတိုင်း ရေးဖို့လဲ အခွင့်အရေးရသူတိုင်း ကျဆုံးသွားသူတွေ အတွက်ရေးရပါမယ် တချိန်တုန်းက တို့ခေါင်းဆောင်တွေ ထိရင် အသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ် ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကိုပဲ ခေါင်းဆောင်တင်ထားလို့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတွေကပဲ စွပ်စွဲပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် အကိုကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်တွေကိုလေးစားခဲ့ ခင်မင်ခဲ့ပါတယ် ခုတော့ အများသူငါ အမှန်တရားအတွက် သိသလောက်လေး ထုတ်ဖေါ်နေချိန်မှာ လုံးစေ့ပတ်စေ့ လောက်နီးနီးသိတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ငြိမ်နေတာကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ငြိမ်နေတာကိုက ဟုတ်လို့ ပြောမိရင် သူ့ဖေါ်ငါ့ဖေါ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ စည်းလုံးညီညွတ်နေကြတာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ညီလေးခုလိုရေးတာ.အလွန့် အလွန်ကိုပဲ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုမောင်မောင်ကြွယ်ဓါတ်ပုံရရင် တင်ပေးပါဦး။